Isbeddellada Tafaariiqda iyo Macaamiisha ee 2021 | Martech Zone
Haddii ay jirtay hal wershadood oo aan aragnay in si muuqata isbeddelay sannadkan hore waxay ahayd tafaariiq. Ganacsiyada aan lahayn aragti ama ilo ay si dijitaal ahaan ah u korsadaan waxay isku arkeen burbursan sababo la xiriira qufulka iyo aafada.
Sida laga soo xigtay warbixinnada xiritaanka dukaamada tafaariiqda ayaa sare u kacay 11,000 sanadka 2020 iyadoo kaliya la furay 3,368 xarumo cusub.
Kala hadal Ganacsiga & Siyaasadda
Taas macnaheedu maahan inay bedeshay baahida loo qabo macaamiisha alaabada xiran (CPG), in kastoo. Macaamiisha ayaa khadka tooska ah ka galay halka ay alaabada ugu soo diraan ama ay ku keydsadaan soo qaadashada.
RangeMe waa barxad internetka ah oo awood u siisa iibsadayaasha tafaariiqda inay ogaadaan alaabooyinka soo ifbaxaya iyadoo awood siineysa alaab-qeybiyeyaasha si ay u maareeyaan una koraan magacyadooda. Waxay ku soo saareen faahfaahin faahfaahsan tafaariiqda sare iyo isbeddelada CPG ee 2021.
22021 waxay noqon doontaa wakhti ay ganacsatadu mustaqbalka iska caddeeyaan naftooda maaddaama aan ku sii socon doonno raadinta saamaynta aafada adduunka. Macaamiisha, alaab-qeybiyeyaasha, iyo dukaamada, helitaanka wax soo saarka cusub wuxuu yeelan doonaa dul-saar aad u sarreeya oo ku saabsan caafimaadka iyo ladnaanta iyo sii wadida sii wadida iyo dadaallada kala-duwanaanta. Waxaa sidoo kale xooga la saari doonaa ku habboonaanta wax soo iibsiga, soo saarista maxalliga ah, iyo qiimaha-miyir-qabka.
Tafaariiqda Sare iyo Isbeddellada CPG ee 2021
Isbeddellada Tafaariiqda Sare
Iibsiga Qiimaha ku fadhiya - 44% dadka wax iibsanayaa waxay qorsheynayaan inay yareeyaan iibsashada aan muhiimka ahayn maadaama heerka shaqo la’aanta ay sii kordheyso.
Iibso-Hada-Bixi-Kadib - Waxaa jiray 20% kordhin Sannad-Sanad ah (YoY) iibsashada-hadda-bixinta-dambe - taas oo ka dhigan $ 24 bilyan oo iib ah.
Kala duwanaanta - Xilligan cusub ee macaamilka miyir-qabka ah, warshaduhu waxay ka shaqeynayaan keenista is-dhexgal iyo kala-duwanaansho xagga hore iyo soo saarista alaabada laga tirada badan yahay ee hore iyo bartamaha.
Sustainability - Macaamiisha miyir-qabka u leh deegaanka waxay rabaan summadaha inay yareeyaan tirada baakadaha ay isticmaalayaan.
Dukaan Yar, Dukaan Deegaanka - 46% macaamiisha waxay u badan tahay inay la dukaameystaan ​​ganacsiyada maxalliga ah ama kuwa yar yar fasaxan ugu dambeeya marka loo eego fasaxyadii hore.
dhibyaraan - 53% macaamiisha ayaa qorsheynaya inay wax u dukaameystaan ​​siyaabo waqtiga u ilaaliya, xitaa marka aysan aheyn qiimaha ugu hooseeya.
Ecommerce - Waxaa jiray 44% koror ku yimid dukaamaysiga khadka tooska ah, saddex-jibbaar kobaca sanadlaha ah ee Mareykanka sanadihii hore!
Leben & Madaafiic la beddelay - 44% ka mid ah 500 ee tafaariiqleyaasha ugu waaweyn ee leh dukaamada jireed ee la siiyo soo qaadka dhinaca, maraakiibta-lagu kaydiyo, iyo Iibso khadka tooska ah, ka soo qaado Bakhaarka (BOPIS)
Isbeddellada Habdhaqan ee Iibsiga Macaamiisha
Raaxo iyo Lacag La'aan - Raaxada iibka ee sanadka 2020 waxay kordhisay 9% sanadkii la soo dhaafay iyadoo dadka ka shaqeeya guryahooda ay eegeen inay hagaajiyaan deegaankooda oo ay naftooda koolkooliyaan.
Maskaxda iyo nafaqada jirka - 73% dadka wax iibsanaya waxaa ka go'an inay taageeraan caafimaadkooda; 31% iibsashada waxyaabo badan oo loogu talagalay caafimaadkooda (oo ay ku jiraan miisaanka, caafimaadka maskaxda, difaac, iwm.)
Caafimaadka Caarada - 25% macaamiisha adduunka waxay la il daran yihiin arrimaha caafimaadka dheefshiidka. Macaamiisha waxay gaarayaan alaabada taageerta waxayna iska ilaalinayaan alaabada aan taageerin.
Dharka Dib U Soo Noqo - Maaddaama cudurrada faafa ay dib u guranayaan, warshaduhu waxay filayaan 30% koror xagga iibka dharka ah sannadkan.
Dhiirrigelinta dhirta - Waxaa jiray koror 231% YoY bishii Maarso ee iibka raashinka ee dhirta ku saleysan cusub oo ay keeneen caafimaadka, cunnooyinka kala duwan, iyo helitaanka wax soo saarka.
Jeesjeesyada - Waxaa jiray 42% kor u kac ah raadinta Google ee cabbitaannada aan khamriga ahayn!
Isbedelada Habdhaqanka Iibsashada Macaamiisha Caalamiga ah
Caafimaadka Ka-hortagga - 50% macaamiisha Shiinaha waxay qorsheynayaan inay lacag badan ku bixiyaan daryeelka caafimaadka ee ka hortagga ah, fiitamiinnada iyo kaabisyada, iyo cuntooyinka dabiiciga ah.
Badeecad Bilaash ahs - Waxaa jiray koror 9% ah oo ku saabsan alaabooyinka aan loo dulqaadan karin cuntada. Fiyatnaam, tusaale ahaan, beddelka caanaha aan caanaha lahayn sida noocyada caanaha lowska kujira ayaa caan ku ah.
Vegan - 400,000 Macaamiil Ingiriis ah ayaa isku dayay cunno vegan ah sanadka 2020! 600 shirkadood oo reer UK ah ayaa dallacsiiyay Veganuary waxayna bilaabeen 1,200 oo soosaarayaal vegan ah.
Qurxinta Gudaha - 60% macaamiisha ku nool Isbaanishka waxay u arkeen wax soo saarka Isbaanishka asal ahaan inay yihiin cunsur muhiim u ah iibsashada. Macaamiisha Jarmalku waxay shiday isbeddel maxalli ah oo lagu iibsado joogtaynta iyo mas'uuliyadda bulshada.
Tags: dharkiibopisleben iyo hooloiibso lacag bixinta khadka tooska ah dukaankauxirid xiranisbeddelada iibsashada macaamiishaalaabada macmiilkadhadhanka gudahaiibinta qad la'aantasuuq geynta omnichanneliibka khadka tooska ahcaafimaadka ka hortagga ahqiimaha miyir-qabka ahiibinta dukaamadaisbeddellada tafaariiqdawaaritaankavegan